28 | November | 2016 | nepalbritain.com
Archives for 28th
Daily Archives November 28, 2016
अल्डर्सटमा बन्ने नेपाली मन्दिरका लागि रवि लामिछाने एक्लैको पन्ध्र लाख बढ़ीको सहयोग
November 28, 2016 | Comments Off on अल्डर्सटमा बन्ने नेपाली मन्दिरका लागि रवि लामिछाने एक्लैको पन्ध्र लाख बढ़ीको सहयोग
बेलायतको अल्डरसटमा झन्डै बीस हजार नेपालीको बसोबास छ । हजारौंको संख्यामा भारतीय हिन्दूहरू पनि बस्छन् तर प्रार्थना र सांस्कृतिक सहभागिताका निम्ति स्थायी मन्दिरको भने अभाव छ । मन्दिरको यो अभाव पूरा गर्न शिव कल्चरल कमिटीको नेतृत्वमा स्थानीय नेपाली र भारतीय मूलका नागरिकहरू अहिले युद्धस्तरमा कस्सिएका छन् । गत आइतबार अल्डरसटकै एम्पायर बनकेटिंगमा भव्य च्यारिटी समारोह आयोजन गरेर मन्दिरका निम्ति रकम संकलन गर्ने अभियान थालियो । उक्त च्यारिटी साँझमा स्थानीय हिन्दूहरूदेखि टाढाबाट गएका नेपालीहरूले समेत उल्लेख्य रकम कबुल गरे । तर मन्दिर भनिएको शहर अल्डरसटभन्दा धेरै टाढा उत्तरी लण्डनमा बस्ने नेपाली युवा उद्योगी रविजङ्ग लामिछानेले ठूलो छाती देखाएर सबैभन्दा बढ़ी रकम
शिव मन्दिर बनाउन ५८ हजार पाउण्ड संकलन
November 28, 2016 | Comments Off on शिव मन्दिर बनाउन ५८ हजार पाउण्ड संकलन
लन्डन । बेलायतमा शिवको मन्दिर बनाउन एकै दिनमा ५८ हजार पाउण्ड संकलन भएको छ । शिव कल्चर एण्ड कम्युनिटी सेन्टरको आयोजनामा आइतवार अल्डरशटमा सम्पन्न च्यारिटी डिनरमा उक्त रकम उठेको हो । कम्युनिटी सेन्टरका अध्यक्ष सुनितजङ्ग जयनको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जीव बेलवासेले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए । रोहित गुरुङले संचालन गरेको कार्यक्रममा महासचिव सूर्य उपाध्यायले शिव मन्दिरको निमार्णका लागि प्रस्तावित परियोजनाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सँघको यूरोप संयोजक कुल आचार्य, सल्लाहाकार विश्वआर्दश पण्डित नेपाली दूतावास लन्डनका प्रतिनिधी तेजेन्द्र रेग्मी लगायतले शुभकामना मन्तब्य दिएका थिए । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन बिक्रम भट्टराईले सकृय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चीनमा क–कसलाई भेटे ?
November 28, 2016 | Comments Off on पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चीनमा क–कसलाई भेटे ?
काठमाडौं । चीनको महत्वपूर्ण भेटघाट पूरा गरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वदेश फर्किएका छन् । सिंगापुर हुँदै चीन पुगेका शाहले महत्वपूर्ण भेटघाट गरेका छन् । देशमा राजनीतिक मुद्दाहरु सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा वुहारी हिमानी शाहलाई साथ लिएर उनले चीनका महत्वपूर्ण व्यतित्वसँग भेट गरेका हुन् । १० दिने लामो चीन भ्रमणका क्रममा पूर्व राजा शाहले चिनका पूर्वराष्ट्रपति हुँ जिन ताओ, सीपीसीका भेट्रान लिडरहरु लिऊ,हुँ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङका सल्लाहाकार प्रा. लि, अफिसियल थिङ ट्याङक सुलि फिङ, सी सान्थाओ लगायतलाई भेटेका हुन् । भेटका क्रममा पूर्व राजा शाहले देशको विग्रदो अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै छिमेकी देशहरुका बारेमा समेत चासो व्यक्त गरेको
प्रदेश टुक्राउने विवादले कांग्रेस संसदीय दलमा चर्काचर्की
November 28, 2016 | Comments Off on प्रदेश टुक्राउने विवादले कांग्रेस संसदीय दलमा चर्काचर्की
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), मधेस केन्द्रित दललगायतका दलहरुसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलमा आज बसेको काँग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले अन्य दलसँग आवश्यक छलफल गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तावबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । संशोधनको मस्यौदाका सम्बन्धमा बृहत् रुपमा छलफल भएको उक्त बैठकमा खासगरी सीमाङ्कनमा चर्काचर्की बहस भएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् । सीमाङ्कनका सम्बन्धमा पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला झिकेर छिमेकी प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावमा सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले विरोध गर्नुभएको
मधेशी गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा ठोस निर्णय गर्ने
November 28, 2016 | Comments Off on मधेशी गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा ठोस निर्णय गर्ने
काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनले सरकारसँग भएका वार्ताको समीक्षा गर्दै आगामी बैठकमा संविधान संशोधनका बारेमा ठोस निर्णय गर्ने भएको छ । सङ्घीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न ढिलो गरेको अवस्थामा लिने निर्णयका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो राजधानी बाहिर रहेकाले आज ठोस निर्णय नभएको सद्भावनाका महासचिव मनिषकुमार सुमनले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि दिएको १५ दिने समय सीमा सकिएपनि सबै नेता काठमाडौँमा नभएकाले ठोस निर्णय नभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,
लाखौँले गैरकानुनी रूपमा मतदान गरे : ट्रम्प
November 28, 2016 | Comments Off on लाखौँले गैरकानुनी रूपमा मतदान गरे : ट्रम्प
वासिङटन । अमेरिकी राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुभएका डोनाल्ड ट्रम्पले थप प्रमाण नदिइकनै आइतबार निर्वाचनमा मतदाताबाट गम्भीर जालसाजी भएको र लाखौँ व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा मतदान गरेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्ना भनाइ प्रमाण नदिइकनै ट्विटरमा व्यक्त गर्नुभएको हो । ह्वाइट हाउसतर्फको मार्गमा सबैलाई चकित बनाउँदै प्रवेश गर्नुभएका ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रतिद्वन्द्व हिलारी क्लिन्टनभन्दा कम लोकप्रिय मत प्राप्त गर्नुभएको छ । क्लिन्टनले ट्रम्पको भन्दा २२ लाख बढी मत प्राप्त गरे पनि ट्रम्पले इलेक्टोरल कलेजमा बढी मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसैका आधारमा अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको निर्वाचन निर्धारण हुन्छ । रिपब्लिकन पार्टीका अरबपति ट्रम्पको पछिल्लो भनाइमा लाखौँ व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा
के रामदेवले नै बन्द गराएका हुन् सिंहदरबार बैद्यखाना ?
November 28, 2016 | Comments Off on के रामदेवले नै बन्द गराएका हुन् सिंहदरबार बैद्यखाना ?
भनिन्छ, नेपालमा जड़ीबुटीको अपार खानी र प्रचुर सम्भावना छ । तर कसैले त्यसको प्रशोधन र व्यापार गर्नलाग्यो भने लौ रित्याउन लाग्यो भन्ने रुवावासी पनि सँगै जन्मिन्छ । हामी जेमा पनि राष्ट्रवाद घुसाइहाल्छौं । सस्तोमा जडीबुटी बेचेर महँगो औषधि किन्नुभन्दा यहीँ औषधि उत्पादन भयो भने त्यसको विश्वबजारमा राम्रो मूल्य आउँछ । जति धेरै कम्पनी खुले त्यति फाइदा हुने हो । स्थानीयले जड़ीबुटी खेती गर्न पाउँछन्, रोजगारी पाउँछन् । प्याकेजिङ्गदेखि वितरणसम्म अन्य घरेलु उद्योग फस्टाउँछन् । स्थानीयले आयातकर तिर्नु नपर्ने हुनाले सस्तोमा औषधि पाउँछन् । अहिले अरबभन्दा बढ़ीको आयुर्वेदिक औषधि आयात भइरहेछ । भोलि आयातलाई निरुत्साहित गरेर निर्यातक बन्ने सम्भावना भएको क्षेत्र
नेपालको दोस्रो हार, श्रीलङ्कासँग आठ विकेटले पराजित
November 28, 2016 | Comments Off on नेपालको दोस्रो हार, श्रीलङ्कासँग आठ विकेटले पराजित
काठमाडौं । थाइल्यान्डमा जारी एसिसी महिला एसिया कप टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग आठ विकेटले पराजित भएको छ । बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको खेल मैदानमा आज भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले १६.२ ओभरमै सबै विकेट गुमाएर २३ रन मात्र बनाउन सक्यो । चौबिस रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्काले ४.३ ओभरमा मात्र दुई विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेट्टायो । नेपालका लागि ज्योति पाण्डेले १६ रन बनाउनबाहेक अन्य वाट्सओम्यानले बिर्सन लायक प्रदर्शन गरे । सीता राना मगरले चार तथा कप्तान रुविना क्षेत्रीले एक रन बनाए भने अन्य सबै व्याट्सओम्यान शून्य रनमा पेवेलियन फर्किए । नेपालका लागि कप्तान रुविना
कांग्रेस विवाद मिलाउन नेता पौडेल जापानमा
November 28, 2016 | Comments Off on कांग्रेस विवाद मिलाउन नेता पौडेल जापानमा
लन्डन । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल जापान पुगेका छन् । सोमबार टोकियो बिमानस्थलमा उत्रिएका पौडेलको स्वागतका लागि त्यहाँस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बाक्लो उपस्थिती थियो । पौडेलको स्वागतका लागि जापानका लागि कार्यवाहक राजदूत कृष्णचन्द्र अर्याल विमान स्थलपुगेका थिए । पौडेलले नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको आयोजिनामा हुने बिषेश अन्तरकृया कार्यक्रममा भाग लिने छन् । पौडेल एक हप्ता सम्म जापानमा रहने कांग्रेस महाअधिवेसन सदस्य चिरन्जीबी थापाले जानकारी दिए । पौडेलको भ्रमणकाक्रममा लामो समय देखी विवादस्पतद रहेको नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको विवाद मिलाउने प्रयास हुने कांग्रेस नेता रोसन केसीले बताए । पौडेलले आजै सबै पक्षसँग छलफल गरेर विवाद टुग्गाउन प्रयास
शेयर बजारमा आज दुई पटक सर्किट ब्रेक
November 28, 2016 | Comments Off on शेयर बजारमा आज दुई पटक सर्किट ब्रेक
काठमाडौं । शेयर बजारमा कारोवार सुरु हुनासाथ नेप्से अप्रत्याशित रूपमा घटेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आज पनि सर्किट ब्रेक लगाएको छ । बजार ३ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेपछि कारोवार शुरु भएको चालिस मिनेटमै ब्रेक लागेको हो । स्टक एक्सचेन्जमा सेयर मूल्य केही दिन यता अनपेक्षित रुपमा घटीरहेको छ । कारोबार सुरु भएको ४० मिनेटमै नेप्से ३ प्रतिशत अर्थात ४४ अंकले घटेर एक हजार चार सय पच्चिस दशमलव एकतिस अंकमा झरेपछि सर्किट ब्रेक लगाईएको हो । सर्किट ब्रेकपछि पुनः सुरु भएको कारोबारमा पनि नेप्से निरन्तर ओरालो लागेपछि दोस्रो पटक सर्किट ब्रेक लगाईयो । आज कारोबार सुरु भएको पहिलो ४० मिनेटमा १४ करोड ३०
महाधिवेशनको बारेमा जानकारी
एम्बुलेन्सको काम आफन्त, डाक्टर र अस्पतालका कर्मचारी ओसार्ने
म्यादीसँग अन्य प्रहरीको झडप
‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म सरकार नछाड्ने’
छोरो गुमाएको दश वर्षपछि बीमा
राजकुमार ह्यारीले लिए ओवामाको अन्तर्वार्ता
एनआरएन यूकेको १ सय दिन सफल
युवालाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्न जोड
यौन व्यवसाय फस्टाउन थालेपछि प्रहरीको कडा कदम